Halkan waxaa ah 10 Isbeddellada Weyn iyo Cusboonaysiinta - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Halkan waxaa ah 10 Isbeddellada Weyn iyo Cusboonaysiinta - BGR
Halkan waxaa ah 10 Isbeddellada Weyn iyo Cusboonaysiinta - BGR
Ku dhawaad ​​seddex sano ilaa maalinta ka dambeysa bilaabashada jilitaanka hamika adduunka No Man Sky wuxuu helayaa waxa laga yaabo inuu yahay cusboonaysiinta ugu muhiimsan ee waqtiga oo dhan: cusboonaysiin u oggolaaneysa isaga inuu ilaaliyo ballanqaadyadiisa oo dhan. Ciyaaraha Hormuudka Ciyaaraha ah ee loo yaqaan 'Hello Games' ayaa sameeyay waxyaabo cusub oo cusub ka hor intii aan la siidayn ciyaarta.
Beyond ma aha oo kaliya cusboonaysiinta ugu weyn ee abid loo sameeyo ciyaarta laakiin Ciyaaraha Salaanta xitaa waxay ka dhigtay inay baaba'aan illaa loogu yeero Cusboonaysiinta 2.0, taas oo tilmaamaysa inay runtii tahay isbeddelka xiga ee No Man Sky . Xaqiiqdii, waxaa jira waxyaabo badan oo cusub oo la sameeyo, abuurlo cusub oo la kulmo iyo astaamo cusub oo la tijaabiyo, in aaney waxtar lahayn in dhammaantood la qoro ( hubi qoraalada sii deynta ). Taa bedelkeed, waxaan soo liis gareeynaa toban sababi oo aad ugu noqonaysid No Man Sky .
Mar labaad, waxaan doonayaa in aan mar kale ku celiyo in ay jiraan daraasiin iyo daraasiin isbedelo iyo isugeyn ah oo ku saabsan cusboonaysiinta 'Beyond', laakiin waa kuwan tobanka qodob ee ugu sareeya qoraalada patch ee xiisaha geliya:
Taageerada dhabta dhabta ah : Hada waad wada ciyaari kartaan No Man Sky VR on PC ama PSVR. Waxaad si aan kala go ’lahayn isku beddeli kartaa labada qaybood wakhti kasta, oo mar alla markii aad sidaa samayso, ciyaartuna way is waafiqi doontaa. Feylasha waxaa si gaar ah loogu talagalay xaqiiqda dalxiiska oo xitaa waxaad awood u yeeli kartaa raadis oo aad ku qabsan kartaa walxaha gacanta ku haysa xaqiiqda dhabta ah.
Multiplayer ugu fiican : Marka lagu daro awood u lahaanshaha inaad ku aragto dhamaan moodooyinka dabeecada markaad la kulanto ciyaartoy kale inta aad ka dhex sahaminayso adduunka, waxaad isticmaali kartaa istcimaalka Voice & Networking si aad u wada mideysaan. Tirada ugu badan ee ciyaartooyda kudhaqmayaasha ayaa isbadalay 4 ilaa 8 iyo dhanka 4 PC ilaa 32.
Cilmiga hawada : Ma dareentaa cidlo? Baro Xarunta cusub ee bulshada ee No Man's Sky - naf-hurida hawada. Illaa iyo cayaartoyda 32 ayaa si isku mid ah xarunta ugu jiri kara waxaad fursad u heli doontaa inaad la kulanto, hubiso maraakiibtooda, booqato saldhigyadooda iyo xitaa inaad kaqeybqaadato howlgalada hadaad rabto.
Geedo farsamo : Go'aanso waxa la sameeyo waxa ku xiga No Man Sky had iyo jeer waxay ahayd halgan, laakiin geedaha tikniyoolajiyadda cusub waxay siinayaan wakiil cad oo ku saabsan sida loo furi lahaa walxaha cusub iyo cuntada.
dynamic NPCs Markii aan bilaabay in aan sahamin adduunkan meeriska ah, dhibaatooyinkayaga shaqsiyeed midkoodna weligay ma arkin qof kale oo ag maraya, raadinaya agab, ama baaraya hal abuurka halista ah. in Beyond tani mar dambe maahan kiiska, maxaa yeelay shisheeye-yaasha ayaa ugu dambeyntii lugayn doona oo la macaamili doona deegaanka.
Hal abuurka Mar alla markii aad kuwadajeedsato xayawaan leh biit, hadda waad fuuli kartaa oo waad fuuli kartaa. iyaga hareeraha meeraha. Waxaad sidoo kale u soo qaadan kartaa xayawaanno dhalanaya caano, ukun iyo waxyaabo kale oo karinta ah.
Dhismaha aasaasiga ah wuu fiicnaaday Haddii aad rabto inaad dhisto saldhig, waad jeclaan doontaa cusboonaysiintaan maxaa yeelay hadda waxaad leedahay aragti cusub, hel tilmaamyo muuqaal ah oo loogu talagalay dhibcaha xajmiga ah oo isticmaal jetpack-kaaga.
Koofiyadaha dib loo eegay : Ilaa intaad dhex marayso markabkaaga gaarka ah No Man Sky weligeed kama soo bixin gudaha gudaha. Waxay ka timid Beyond nashqadeynta dhamaan rootiyada oo dhan ayaa dib loo habeeyay. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ku yeelan kartaa muuqaal ah heerka '360 digrii' ee ka soo baxa 'VR'.
Bogga daahfurka : Raalli ahaanshaha kana yimid No Man's Sky waa in la ogaado inta ku dhawaad ​​aan dhammaadka lahayn ee flora iyo fauna ku baahsan adduunka oo dhan. Boggan cusboonaysiinta iyo ballaadhinta daahfurka, waxaad hadda ku daawan kartaa daahfurkaaga si aad u faahfaahsan oo ka badan sidii hore, iyo sidoo kale akhrisan kartaa qoraallada dhaadheer.
Assis : Hada waad ku fariisan kartaa kuraasta. Gamechanger.
Waxaan damacsanaa inaan saacado kooban la qaato ciyaartaan toddobaadkan si aan u arko cusboonaysiinta '2.0' oo ah sidii ciyaarta asalka ahayd aysan ahayn, laakiin si kastaba ha noqotee, waa wax cajiib ah oo laga argagaxo arag istuudiyaha ciyaaraha lagu sii wado inuu taageerayo ciyaartiisa si aad muhiim u ah iyadoo cusboonaysiinta gabi ahaanba bilaash laga dhigo sannado ka dib bilowga.
Isha Isha Sawirka: Ciyaaraha Hello
Marna kama eegi karo Netflix mar dambe haddii aanan ka eegin barnaamijkan cusub ee weyn - BGR
Ukunta Easter-ka ee wejiga ugu dambeeya ee aad seegtay ... maxaa yeelay runtii ma arki kartid - BGR
ROGUE LINEAGE TRINKET ESP & WALLHACK iyo waxbadan oo ka sii badan ROBLOX HACKEXPLOIT! - VIDEO
Wasaaradda Gadiidka ayaa bilaabaya hawsha diiwaan galinta gawaarida tareenka
Hindiya: Triple Talaq: SC waxay ogeysiis u dirtay Xarunta u doodista sharciga cusub; ogolaaday in la baaro ansaxnimada | Wararka Hindiya
Amazon: waa "gebi ahaanba deegaanka oo gubanaya," ayuu yiri agaasimaha Luc Jacquet ee RTL - VIDEO
Daadad ka dhacay daarta weyn ee Isbitaalka Jaamacadda Yopougon: Dadweynaha ayaa xanaaqsan (+ video)
DADKA & LIFESTYLE3,237
TECH & TELECOM1,603
Video dheeraad ah1,375